Igbo, John: Lesson 042 - Jizọs nyere ndị mmadụ nhọrọ, "Nabata ma ọ bụ jụ!" (Jọn 6:22-59) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 042 (Jesus offers people the choice)
22 N'echi ya, ìgwè mmadụ ahụ guzoro n'akụkụ nke ọzọ nke oké osimiri hụrụ na ọ dịghị ụgbọ mmiri ọzọ nọ n'ebe ahụ, ma e wezụga nke ndị na-eso ụzọ ya banyere, nakwa na Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya abanyeghị n'ụgbọ mmiri ahụ, ma ndi nēso uzọ-Ya alawo nání Ya. 23 Otú ọ dị, ụgbọ mmiri si Taịbiriọs bịarutere ebe ha riri achịcha mgbe Onyenwe anyị kelere ya. 24 Ya mere mb͕e ìgwè madu ahu huru na Jisus anọghi n'ebe ahu, ma-ọbu ndi nēso uzọ-Ya, ha onwe-ha ba n'ub͕ọ-ha, bia na Kapanaum, nāchọ Jisus. 25 Mgbe ha hụrụ ya n'ofe oké osimiri ahụ, ha jụrụ ya, sị, "Rabaị, olee mgbe ị bịara ebe a?"
Mgbe ìgwè mmadụ ahụ ghọtara na Jizọs abanyebeghị n'ụgbọ mmiri ahụ, o juru ha anya na ọ gbanahụrụ ha. Enye ama efep ebe ke okoneyo.
Ọtụtụ puku mmadụ laghachiri na Kapanaum na-agagharị akụkọ banyere achịcha ahụ a na-enye n'efu. O juru ndị mmadụ anya, ha na-enwekwa anyaụfụ ịkọrọ ha ihe ọma a. Ìgwè mmadụ ahụ nọ na-achọgharị Jizọs n'ụlọ ndị na-eso ụzọ ya ruo mgbe ha hụrụ ya n'etiti ha. Ha malitere ịhụ eziokwu nke ụkpụrụ Ndị Kraịst, "Ebe mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ gbakọtara n'aha m, anọ m n'etiti ha."
Ndị ahụ na-echegbu onwe ha maka ọrụ ebube maara ihe ọhụrụ dị ebube. Ha jụrụ, "Olee mgbe na mgbe ị bịarutere n'ebe a?" Jizọs azaghị ajụjụ ahụ, kama ọ bụ maka nchegbu ime mmụọ ka ọ ghọtara ihe okwukwe pụtara, na-achọ ịdọta ndị nwere obi eziokwu n'etiti ndị na-anụ ọkụ n'obi n'ịhụ ya n'anya, ma gosipụta aghụghọ nke ndị iro ya. Jizos choro udi ihe ojoo ahu ma we kewapu ndi kwere ekwe site na ndi mmadu ndi okpukpe.
26 Jisus zara ha, si, N'ezie, n'ezie, asim unu, Unu nāchọm, ọ bughi n'ihi na unu huru ihe-iriba-ama, kama n'ihi na unu riri achicha, afọ ju kwa unu. 27 Unu atukwasila ihe-oriri nke nāla n'iyì, kama ọ bu nri nke nānọgide rue ndu ebighi-ebi, nke Nwa nke madu gēnye unu. N'ihi na Chineke, bú Nna, akàrà-ya.
Jisos duru ndi mmadu aka na nti: Unu adighi ahu n'anya ma obu cho m, ma unu echeghi echiche ziri ezi banyere Chineke, ma unu chere banyere afo na achicha. Ị ghọtaghị ihe ịrịba ama ahụ maka nzube m abụghị naanị iji mee ka agụụ sie gị agụụ, kama ịme ka ị mara m na ike m. Ị na-achọ onyinye ma na-eleghara onye nyere gị anya. Ị na-atụle ihe gbasara ụwa, ma ekweghị na chi m.
Emela na-adọgbu onwe gị n'ọrụ kwa ụbọchị maka nri na ihe ọṅụṅụ, ma chee echiche banyere ike nke Chineke. Unu adịla ka anu-ọhia nke nēri ihe-oriri, kama nābiakute Chineke Onye bu Mọ. Ọ dị njikere inye gị ndụ ebighi ebi.
Jizos kwukwara, sị: Abịara m ụwa, inye gị nnukwu onyinye Chineke. Adịghị m mmadụ nkịtị na ọbara. Ma m na-enye onyinye Chineke n'ime onwe m maka ngọzi gị. Chineke amala m site na Mmụọ Nsọ ya iji nye ndụ ime mmụọ ma mee ka ị dịghachi ike n'eluigwe.
Site na nkwupụta a, Jizọs kpọsara nnukwu ihe nzuzo ahụ, na Chineke na-elekọta mmadụ nile, na-enye ụmụ mmadụ nri ma hụ ha n'anya. Ọ bụghị chi iwe na-ekwusi ike idebe iwu tupu ngọzi. Ọ na-agọzi ndị ezi omume na ndị ajọ omume, na-eme ka anyanwụ ya na-enwu gbaa na mmadụ niile n'enweghị ọdịiche, ọbụna ndị na-ekweghị na Chineke na ndị nkwulu. Chineke bụ ịhụnanya, Kraịst chọkwara ịtọhapụ ìgwè mmadụ ahụ pụọ n'echiche nke ịhụ ihe onwunwe ha, mee ka ha laghachikwenye Chineke bụ Nna. Ya mere, o kwusiri ike na ala eze ya abụghị nke ụwa, dabere na nri, akụ na ụba na ọchịchị, ma Alaeze nke mmụọ nke na-ejupụta na ndụ Chineke, na-abịakwute ha na Onye nke Kraịst bụ onye na-enye Mmụọ nye ndị niile rịọrọ ya.
28 Ha wee sị ya: "Gịnị ka anyị ga-eme, ka anyị wee rụọ ọrụ Chineke?" 29 Jizọs zara ha, sị: "Nke a bụ ọrụ Chineke, ka unu wee kwere n'onye ahụ o zitere."
Ìgwè mmadụ ahụ aghọtaghị ozizi Jizọs n'ụzọ doro anya, ma ghọtara na ọ na-enye onyinye dị ukwuu sitere na Chineke, ha nile chọkwara ịnata ndụ ebighi ebi. Ha dị njikere ime ihe maka onyinye a. Ha dị njikere idebe Iwu ahụ, ịchụ àjà, ịbị ọnụ, kpee ekpere ma gaa njem iji nweta onyinye Chineke site n'ọrụ. N'ebe a anyị na-ahụ ìsì ha. Ha niile bụ ndị na-ede iwu, na-echegbu onwe ha iji nweta nzọpụta site na mgbalị ha. Ha amaghị na nke a agaghị ekwe omume, ebe ọ bụ na ha mara ikpe ma funahụ ha. Ha ji mpako chee na ha na-arụ ọrụ Chineke, na-eche na ha nwere ịdị nsọ na ike ime nke a. Mmadu kpuru ìsì ruo n'ókè nke na ọ pụghị ịhụ ọnọdụ nke obi ya, ma na-ele onwe ya anya dị ka chi dị nta, na-atụ anya ka Chineke nwee obi ụtọ n'ebe ọ nọ.
Jizos gosiri ha na achugh ha ka ha nye onyinye ma obu omume. A na-akpọ ha ka ha nwee okwukwe na ya. Chineke anaghị arịọ maka mgbalị ma ọ bụ ike, ma na-achọ ka anyị nye Jizọs ma tụkwasị ya obi. Okwu ndị a bụ ihe ịsụ ngọngọ nye ndị mmadụ; nke a wee malite nkewa n'etiti Jizọs na ìgwè mmadụ ahụ. O kwukwara na ọrụ Chineke bụ na ha kwenyere na ya. "Ọ bụrụ na ị meghere mkpụrụ obi gị na Mmụọ Nsọ, ị ga-ama ikike, ọchịchọ na ịhụnanya m, mgbe ahụ ị ga-amata na abụghị m onye amụma, kama ọ bụ Onye Okike, Ọkpara ahụ nke Nna zitere gị. nchegbu ụwa gị ịghọ ụmụ nke Chineke. "
Ikwenye na Jisos bu ijidesi ya ike, ma kwe ka o me ihe n'ime ndu gi, nakweere ndu ya ma nweta ndu ebighebi site n'ike ya. Okwukwe bu imekorita ya na Jizos n'oge na mgbe ebighi ebi. Nke a bụ ọrụ Chineke, onye na-eke ndị kwere ekwe na Ọkpara ya, ka mmehie wee laa n'iyi na ndụ ha nakwa ka ha soro ya ruo mgbe ebighị ebi.
30 Ya mere ha siri Ya, Gini ka I nēme ihe-iriba-ama, ka ayi we hu, kwere kwa Gi? Kedu ọrụ ị na-arụ? 31 Nna-ayi-hà riri manna n'ọzara. Dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, O nyere ha nri site n'elu-igwe ka ha rie. 32 Ya mere Jisus siri ha, N'ezie, asim unu, ọ bughi Moses nyere unu nri sitere n'elu-igwe, kama Nnam enye gị ezi achịcha sitere n'eluigwe. 33 N'ihi na nri Chineke bu nke nēsi n'elu-igwe ridata, nēnye kwa uwa ndu.
Ihe Jizọs chọrọ ka ndị mmadụ na-enye ya zuru ezu bịara dị ka ihe ijuanya. Ha chere na Jizos choro ihe obla site na ha nke apurinye Chineke. Ya mere, ha gwara ya ka o dee ederede iji kwado ihe o kwuru. Dika ha nekwu, "Nye ayi ihe omuma nke chi gi, Moses nyere ndi mmadu n 'ozara, oburu na eme kwa ohuru ubochi, ma oburu na oburu uzo nye ayi oburu otua. ruo ihe dị ka puku ise. Gosi anyị ọrụ ebube ọzọ mgbe ahụ, anyị ga-ekwere. " Nke a bụ ọrịa mmadụ. Mmadu aghara inabata ịhụnanya Jisos n'enweghi ihe obula, kama o na-ekwusi ike na ihe akaebe buru ibu. Ma Jizọs sịrị, "Ngọzi na-adịrị ndị kwere, ma ndị na-ahụghị, ha bụ ndị na-asọpụrụ m na ntụkwasị obi ha."
Jizọs bụ onye nduzi kachasị mma nke duuru ndị na-ege ya ntị site na ntụgharị uche nke iwu kwadoro inwe okwukwe doro anya nime ya. O we b͕aputa madu n'ọchichọ ihe-oriri; ọ bụ ya bụ nnukwu onyinye Chineke.
Dika ihe omuma nke oma nka, Jisos wepuru ha site n'echiche efu ha dika ihe edere n'akwukwo nso, dika asi na obu Moses nyere ha mana. Ọ bụ Chineke, n'eziokwu onye mere nke a, onye na-enye onyinye niile. O mere ka ha guzosie ike ka ha mata na Chineke na-enye ha nri kachasị mma na nri eluigwe nke na-agaghị ala n'iyi. Site n'ilebara ha anya ha g'enyocha na Jisos nekwu na ya bu Okpara Chineke, n'ihi na okpotara Chineke Nna ya. Otú ọ dị, ìgwè mmadụ ahụ nọgidere na-eche banyere nri nkịtị si n'aka Mozis na-agbadata n'eluigwe.
Jizọs weliri echiche ha ịghọta na achịcha Chineke abụghị ihe a ga-elo n'ime afọ, ma ọ bụ Onye nke Kraist nke na-eme ka agụụ ụmụ mmadụ na-agụ maka eziokwu na ndụ dị ukwuu. Onye nēnye onyinye sitere n'elu-igwe ridata site na ngọzi Chineke na ike di uku. Nri nke Chineke abughi ihe onwunwe ma la n'iyi, ma o bu ihe ime mmuo na idi ndu. O siri na ala aputa dika Manna, mana o sitere na Chineke, nke zuru ezu maka mmadu nile n'ime oge nile. Ọ bụghị nanị mkpụrụ Ebreham ka Chineke bụ Nna na-elekọta ụwa dum.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, chebe anyị pụọ na ịchọ ọdịmma onwe onye. Mee ka anyị nwee okwukwe dị umeala n'obi, gee ntị n'ihe ị ga - achọ ka anyị mee, rụọ ọrụ na anyị site na ike gị. Mee ka anyị na gị dịrị n'otu. Mee ka obi gee anyị agụụ site n'ọnụ gị n'ime anyị. Chekwaa anyị ndụ ebighi ebi. Anyị na-ekele gị, Nna, maka ịbịakwute anyị, inye anyị ikike na ngọzi.
Olee otú Jizọs si mee ka ndị mmadụ nwee ọchịchọ maka achịcha iji nwee okwukwe na onwe ya?